ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: မျှော်လင့်ခြင်း ကမ်းပါး
ရေးပြီးချိန်: 6/21/2007 01:09:00 AM
ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးပဲ ...
စာပိုဒ်တခုချင်းဆီမှာ သုံးထားတာလေးတွေ နှစ်သက်မိပါတယ် ...
ကဗျာလေးတွေ ရေးတာကို ကြိုဆိုလျက် ..
ကဗျာက တိုသလိုလိုပဲ...။ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်တွေ စွန်းထင်းနေတယ်။ ဘာတွေ စွန်းထင်းနေလဲဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်ပဲ သိမယ်။ ရှားငယ် ချီးကျူးတာ မိုက်သကွာ။ ဆရာကြီးကဗျာတဲ့။ ဆိုးဝှက်.. ရှားငယ်ကဗျာ နောက်တပုဒ် ထပ်တင်ကွာ။ (ရန်တိုက်ပေးမှ.. ) :P
တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ.. ခုမှ ဘလော့ဂ်ရေးတော့ တို့တွေ ခုမှ ဖတ်ရတာပေါ့.း)
hayhay: ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ .. အမရေ ။ စကားလုံးတိုင်း ထိတာတော့ အမှန်ပဲ ။ နောက်မှပဲ ကူးတော့မယ် . hehe..နောက်တာ